Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #1
Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #2
Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #3
Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #4
Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #5
Ereyga Dagaalkii Qaboobaa #6
Erey-bixinnada Dagaalkii Qaboobaa
Dukumiintiyada Dagaalkii Qaboobaa
Su'aalaha Qoraalka Dagaalkii Qaboobaa
Taariikhyahanadii Dagaalkii Qaboobaa
Taariikhda Dagaalkii Qaboobaa
Kediska xusuusta Dagaalkii qaboobaa - dhacdooyinka 1945 illaa 1950
Kediska xusuusta Dagaalkii qaboobaa - dhacdooyinka 1950 illaa 1959
Kediska xusuusta Dagaalkii qaboobaa - dhacdooyinka 1960-1979
Kediska xusuusta Dagaalkii qaboobaa - dhacdooyinka 1980 illaa 1991
Kediska xusuusta Dagaalkii qaboobaa - kooxo
Kediska xusuusta dagaalkii qaboobaa - hoggaamiyeyaasha
Kediska xusuusta Dagaal qabow - shuruudaha iyo fikradaha (I)
Kediska xusuusta Dagaal qabow - shuruudaha iyo fikradaha (II)
Xusuus qorka dagaalkii qaboobaa
Filimka Dagaalkii Qaboobaa iyo TV-ga
Kediska dagaalkii qaboobaa #1
Kediska dagaalkii qaboobaa #2
Kediska dagaalkii qaboobaa #3
Kediska dagaalkii qaboobaa #4
Kediska dagaalkii qaboobaa #5
Kediska dagaalkii qaboobaa #6
Kediska dagaalkii qaboobaa #7
Kediska dagaalkii qaboobaa #8
Su'aalaha dagaalkii qaboobaa
Oraahyada dagaalkii qaboobaa
Mawduucyada Dagaalkii Qaboobaa
Dagaal qabow yaa yaa
Erey-bixin dagaal qabow - fikradaha
Erey-Dagaalkii Qaboobaa - dhacdooyinka
Erey-bixin dagaal qabow - kooxo
Wordsearch War qabow - dadku
Erey-bixinta Dagaalkii Qaboobaa - meelaha
Erayadii Dagaalkii Qaboobaa
Dagaalkii Qaboobaa waxay ahayd muddo dheer xiisad caalami ah iyo iska hor imaad u dhexeeyey 1945 iyo 1991. Waxaa calaamad u ahaa xafiiltan ba'an oo dhex martay Mareykanka, Midowgii Soofiyeeti iyo xulafadooda.
Odhaahda 'dagaal qabow' waxaa curiyay qoraaga George Orwell, kaasoo bishii oktoobar 1945 saadaaliyay waqti "xasilooni naxdin leh" oo ay ummadaha xoogga badan ama isbahaysiga wada, mid kasta oo awooda inuu burburiyo midka kale, diido inuu la xiriiro ama uu gorgortamo.
Saadaasha xun ee Orwell waxay bilaabatay inay kasoo muuqato 1945. Markii Yurub laga xoreeyay cadaadiskii Naasiga, waxaa deggenaa ciidammadii Soviet Red bari ee bariga iyo Maraykanka iyo Ingiriiska oo galbeedka ku sugnaa. Shirarka lagu go’aaminayo mustaqbalka dagaalkii ka dambeeyay Yurub, xiisado ayaa soo ifbaxay ee u dhexeeya hogaamiyaha Soofiyeeti Joseph Stalin iyo dhiggiisa Mareykanka iyo Ingiriiska.
Bartamihii-1945, rajadii laga qabay iskaashi dagaal kadib dagaalkii ka dhaxeeyey Midowgii Soofiyeeti iyo waddamadii Reer Galbeedka waa la baabi'iyey. Bariga Yurub, wakiillada Soofiyeedka waxay xisbiyadii hantiwadaagga ku riixeen awood, taasoo dhalisay siyaasiga Ingiriiska Winston Churchill si looga digo ah “C daah BirtaKu soo degida Yurub. Mareykanka ayaa ku jawaabey hirgelinta Qorshaha Marshall, oo ah afar sano oo $ 13 bilyan oo xirmo ah oo xirmo ah oo lagu soo celinayo dowladaha yurub iyo dhaqaalahooda. Dabayaaqadii 1940s, faragelinta Soofiyeeti iyo kaalmadii reer galbeedka waxay u kala qaybiyeen Yurub laba qaybood.
Khariidad muujineysa kala qaybsanaanta Yurub xilligii Dagaalkii Qaboobaa
Xarunta xudunta u ah qaybtan ayaa ahayd Dagaalkii Jarmalka kadib, ayaa hadda u kala qaybsan laba qaybood oo magaaladeeduna tahay magaalada Berlin oo ay ku yaalliin afar awoodood oo kaladuwan.
1948, Soofiyeeti iyo Bariga Jarmalka ayaa isku dayay gaajaysan quwadaha reer galbeedka ee ka baxaya Berlin waxaa curyaamiyey diyaaraddii ugu weyneyd taariikhda. 1961 dowladda ee Bariga Jarmalka, wajaho a duulaan ballaaran oo dadkiisa ah, waxay xireysaa xuduudaheeda waxayna ka sameysay caqabad gudaha magaalada kala qeybsan ee Berlin. The Darbiga Berlin, sidii la ogaa, waxay noqotay astaan ​​waarta oo Dagaalkii Qaboobaa.
Xiisadda Dagaal qabow ayaa sidoo kale ku fiday xuduudaha Yurub. Bishii Oktoobar 1949, kacaankii Shiinaha ayaa soo afjaray guushii Mao Zedong iyo Xisbiga Shuuciga Shiinaha. Shiinaha ayaa si dhakhso leh u warshadaystay waxayna noqotay quwad nukliyeer ah, halka halista shuuciyadda ay ku dhaqaaqday dareenka dagaalkii qaboobaa ilaa Aasiya 1962, daahfurka Gantaallada Soofiyeedka ee Jasiiradda Cuba waxay ku riixday Mareykanka iyo Midowgii Soofiyeeti qarka u saaran dagaalka nukliyeerka.
Dhacdooyinkaasi waxay sii hurinayaan heer aan laga fileyn oo looga shakiyo, aaminaad la'aan, jahwareer iyo sirta. Hay'adaha sida Xarunta Dhexe ee Sirdoonka (CIA) iyo Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) ayaa kordhay dhaqdhaqaaqyada covert adduunka oo dhan, ururinta macluumaad ku saabsan dawladaha cadowga iyo nidaamyada. Waxay sidoo kale faragalin ku sameeyeen siyaasada umadaha kale, iyagoo dhiirigelinaya isla markaana keenaya dhaqdhaqaaqyo dhulka hoostiisa ah, kacdoonno, afgambi iyo dagaalada matalaya.
Dadka caadiga ahi waxay la kulmeen dagaalkii qaboobaa waqtiga dhabta ah, iyagoo u maraya mid ka mid ah kuwa ugu degdega badan ololayaasha dacaayadaha taariikhda aadanaha. Qiyamka dagaalkii qaboobaa iyo gumaadka nukliyeerka ayaa guud ahaan ka jiray dhammaan dhaqanka caanka ah, ay ka mid yihiin filim, telefishan iyo music.
Websaydhka Shabakadda Dagaallada Qaboobaa ee Alpha ayaa ah ilaha tayada leh ee buug-yaraha tayo leh ee loogu talagalay barashada daraasadda siyaasadeed iyo millatariga ee u dhexeeya 1945 iyo 1991. Waxay ka kooban tahay ku dhowaad 400 ilaha aasaasiga ah iyo kuwa sare, oo ay kujirto faahfaahin soo koobid mowduuc, documents, waqtiyada, Qaamuusyada ereyada iyo taariikh nololeedkii. Ardayda horumarsan waxay macluumaad ka heli karaan Dagaalkii Qaboobaa taariikh nololeed iyo taariikhyahanada. Ardaydu sidoo kale waxay ku tijaabin karaan aqoontooda oo ay dib ugu soo celin karaan howlo badan oo khadka tooska ah, oo ay ka mid yihiin su'aalaha, cinwaannada ereyga iyo Erey-bixin. Dhinacyada ilaha aasaasiga ah, dhammaan waxyaabaha ku jira Taariikhda Alfa waxaa qoraa macallimiin aqoon iyo khibrad leh, qoraayaal iyo taariikhyahanno.
Filimaanta & TV-ga
Goobtani Dagaalkii Qaboobaa wuxuu ka kooban yahay maqaallo, ilo iyo aragtiyo ka hadlaya dhacdooyinka caalamiga ah iyo xiisadaha u dhexeeya 1945 iyo 1991. Boggan waxaa abuuray Alpha Taariikhda waxaana ku jira ereyo 308,862 ereyo ah bogagga 405. Macluumaad dheeri ah, booqo page FAQ or Shuruudaha Isticmaalka.